कहाँबाट आयो व्याख्यात्मक विश्लेषण ? अमेरिकी दूतावासले खोलिदियो यस्तो रहस्य — Imandarmedia.com
कहाँबाट आयो व्याख्यात्मक विश्लेषण ? अमेरिकी दूतावासले खोलिदियो यस्तो रहस्य
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको छ । गएको आइतबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी , जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा एमसीसी पास गरेका हुन् ।
सुरुमा एमसीसीको विपक्षमा उभिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई यू टर्न गराउन व्याख्यात्मक घोषणाले काम गरेको थियो ।
उक्त व्याख्यात्मक घोषणा कहाँबाट आयो ? यो भने रहस्यको विषय बनेको थियो । यो रहस्यको प्रदाफाँस अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले गरिदिएका छन् । उनले नै यो भूमिका खेलेका कारण एमसीसी पास भएको हो ।
बेरीले नेताहरुलाई प्रत्यक्ष र विभिन्न माध्यमले सम्पर्क गरी मनाएको बुझिएको छ । एमसीसीमा संशोधनको अडान राख्दै आएका प्रचण्ड र माधव नेपालले अन्तिममा व्याख्यात्मक विश्लेषण सहमतिको बिन्दु हुनसक्ने भनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरेका थिए ।
सत्ता गठबन्धन जोगाउन देउवा पनि चाहन्थे । प्रचण्ड र माधव नेपालका लागि गठबन्धन झन् महत्वपूर्ण थियो । तर, एमसीसीको विरोधमा उत्रिएकाले ‘फेस सेभ’ अनिवार्य थियो ।
उपाय व्याख्यात्मक विश्लेषण निस्कियो । विश्वस्त स्रोतका अनुसार व्याख्यात्मक विश्लेषण ड्राफ्ट भयो । त्यसको अंग्रेजीमा उल्था गरियो । १४ फागुनको साँझ अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरी निकै सक्रिय भए ।
उनले ड्राफ्टबारे अध्ययन गरे । त्यसलाई एमसीसीको प्रधान कार्यालय अमेरिकामा पठाएपछि सकारात्मक जवाफ आयो । त्यसपछि व्याख्यात्मक विश्लेषणसहित एमसीसी अनुमोदन भएको बुझिएको छ ।
अमेरिकासँग परामर्श गरेरै व्याख्यात्मक विश्लेषण बनेकोले प्रचण्डले त्यसको जस लिन समेत खोजेका छन् । यसकारण व्याख्यात्मक विश्लेषणलाई आफ्नो जितका रुपमा प्रचण्डले देखाउन खोजेका छन् ।
एमसीसीमा व्याख्यात्मक विश्लेषण गराएर अनुमोदन समेत गराउनुलाई प्रचण्डले आफ्नो रणनीतिक सफलताका रुपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । उनले यो घटनाक्रमसँगै सत्ता गठबन्धन अझ बलियो र टिकाउ भएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् १६ फागुनमा सन्देश दिइसकेका छन् ।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रमा ठूलै पहिरो जाने भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकलौटी निर्णय गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराएको भन्दै उनीहरुले केही दिनमै ठूलै टिमसहित पार्टी परित्याग गर्ने संकेत गरेका छन्।